JobNet Myanmar မွေခၚယူေနေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား | Alote Myanmar
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား :အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု, အလုပ်အကိုင်ခေါ်ယူမှုအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
Level 5, 85 Dhammazadi Road, Kamaryut Township,ရန်ကုန်တိုင်း, Myanmar
သင့်နှင့် သင့်တော်ရာအလုပ် မတွေ့ခဲ့လျှင် နောင်တွင် ကုမ္ပဏီမှ သင့်၏ CV ကို သိမ်းထား၍ သင့်တော်ရာ အလုပ်များရှိပါက ခေါ်နိုင်ရန် လျှောက်ထားလိုက်ပါ
JobNet Myanmar အလုပ်များနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ
JobNet Myanmar အလုပ်များ
Aung Su Ya
"I haveadream workplace which can boost and utilize my creativities, having flexible working style and excellent workmates. Now I got it. And fortunately, It's the market leader in related industry. So, Fantastic. For me JN is the coolest company in my career life so far."
Wint War War Mon
"I have being working4years in JobNet member likeasecond family. I found myself in my first job and good opportunity working with amazing company. I've got fully training & progressing career professional and personally. I am proud to being JobNet family member."
Senior Graphic & Video Designer
“I’ve always been glad to be with JobNet because it is the right place to learn and to execute my thoughts and ideas on any platform as I wish. ​​I feel very gratified and glad to be associated with JobNet and absolutely look forward to working here onalong tenure.”
Eaint Thet Chal
"As an organization the support and encouragement I get from my managers and team members gives me the reason to put in my best efforts. I am grateful to be part of this brilliant team and keen to cover many more years of fantabulous learning."
" I love my job " Because my co-worker are like family. We all start the day together talking and laughing. The company truly cares about each employee and goes above and beyond to show their appreciation. It is overall the best place I have ever worked!
"JobNet provides usaconducive and employee friendly work environment, which helps the employee to give quality work to the JobNet users. In terms of career growth also it provides best platform to enhance knowledge and skills. I feel very gratified and glad to be associated with JobNet and absolutely look forward to work here onalong tenure."
Join the team behind the N.1 job site in Myanmar.
အလုပ်အမျိုးအစား ရွေးပါအထွေထွေစက်မှု၊ လက်မှု ကျွမ်းကျင်၊ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာနှင့်လုပ်သားများစားသုံးသူဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ယာဉ်မောင်း၊ ပစ္စည်းပို့၊ အငှားဆိုင်ကယ်မောင်းငွေကြေးနှင့်စာရင်းကိုင်စားသောက်ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုအထွေထွေလုပ်သား၊လုံခြုံရေးကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပရေးရာဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သိုလှောင်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာစက်ရုံနှင့် အထည်ချုပ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအရောင်းပိုင်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် အလုပ်အမျိုးအစား ရွေးပါ
သင့်တော်ရာအလုပ်လျှောက်ရန် ရွေးချယ်ပါ x
ဝမ်းနည်းပါတယ် သင့်CV သိမ်းဆည်းမှု မအောင်မြင်ပါ။ သင့်ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကို ၂၀% ကျော်အောင် ပြင်ဆင်လိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် CV file တင်ထားပါ!
ဝမ်းနည်းပါတယ် သင့်အလုပ်လျှောက်လွှာ သိမ်းဆည်းမှု မအောင်မြင်ပါ။ သင့်ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကို ၂၀% ကျော်အောင် ပြင်ဆင်လိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် CV file တင်ထားပါ!